RW Rooble oo bilaabaya la kulanka Musharaxiinta Mucaaradka - Awdinle Online
Home News RW Rooble oo bilaabaya la kulanka Musharaxiinta Mucaaradka
RW Rooble oo bilaabaya la kulanka Musharaxiinta Mucaaradka
Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa todobaadkan bilaabaya kulamo uu la yeelanayo qaar ka mid Midowga Musharaxiinta Madaxweynaha, si xal loogu helo caqabadaha ka taagan hannaanka doorashada.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa kulan uu todobaadki hore qadka Zoom-ka kula yeeshay Wakiilada Beesha Caalamka waxaa uu u sheegay inuu diyaar u yahay inuu la fariisto cid walba oo tabasho ka qabta arrinta doorashada.
Ilo ku dhow dhow Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegaya in Ra’iisul Wasaare Rooble uu maanta kulan qado la qaadan doono C/raxmaan C/shakuur Warsame oo ah Hoggaamiyaha Xisbiga Mucaaradka ee Wadajir, kana mid ah Midowga Musharaxiinta Madaxweynaha.
Wararka ayaa sheegaya in kulanka uu yahay mid uu dalbaday Ra’iisul Wasaare Rooble, si uu xal ugu raadiyo caqabadaha iyo khilaafka ka jira hannaanka doorashada.
Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa waxaa maalmihii la soo dhaafay cadaadi ku saarayay in wax laga qabto tabashada mucaaradka xubnaha Beesha Caalamka ee taageerada siiya Soomaaliya, taas oo keentay in uu kulan ka dalbado.
Previous articleCiidamada Ammaanka oo sameeyay Howlgal lagu soo qabtay hub & waxyaabaha qarxa
Next articleBaarlamaanka Hir-Shabeelle oo hal Arrin isku heysta & muran ka dhex-jira